Ama-organic compounds (VOCs) angamakhemikhali aphilayo anengcindezi ephezulu yomhwamuko ekamelweni lokushisa elijwayelekile. Ingcindezi yabo ephezulu yomhwamuko iphuma endaweni ebilayo ephansi, okuholele ekutheni izinombolo ezinkulu zama-molecule zihwamuke noma zinciphise kusuka kuketshezi noma ziqine kusuka enkomponi bese zingena emoyeni ozungezile. Amanye ama-VOC ayingozi empilweni yomuntu noma adala imvelo.
Isimiso sokusebenza se-Vocs treatment:
I-Integrative VOCS iyunithi ye-condensate kanye ne-recovery isebenzisa ubuchwepheshe besiqandisi, ukupholisa ama-VOCs kancane kusuka ekushiseni kwama-ambient kuye -20 ℃ ~ -75 ℃ .Ama-VOC atholwa ngemuva kokuncishwa futhi ahlukaniswa nomoya. Yonke le nqubo iyaphinde isebenze, kufaka phakathi ukufingqa, ukwehlukanisa nokubuyiselwa ngokuqhubekayo. Ekugcineni, igesi eguquguqukayo iyakufanelekela ukukhishwa.
Isitoreji samafutha / samakhemikhali
Uwoyela / Amakhemikhali ethekwini
Ukwelashwa kwama-VOC wezimboni
I-VOCs condensate kanye neyunithi yokuthola kabusha yamukela ifriji yomshini nokupholisa okuqhubekayo okuningi ukunciphisa izinga lokushisa kwama-VOC. Ukushintshanisa ukushisa phakathi kwegesi esiqandisini neyokuguquguquka kokushintshaniswa kokushisa okuklanyelwe ngokukhethekile. Isifriji sithatha ukushisa kusuka kugesi ongazinzile futhi senze ukushisa kwaso kufinyelele emazolo kukhombe ekucindezelekeni okuhlukile. Igesi ephilayo eguquguqukayo ifakwe ketshezi futhi yehlukaniswe nomoya. Le nqubo iyaqhubeka, futhi i-condensate ikhokhiswa ethangini ngqo ngaphandle kokungcola kwesibili. Ngemuva kokuthi umoya ohlanzekile osezingeni eliphansi ufinyelele izinga lokushisa elilinganiselwe ngokushintshanisa ukushisa, ekugcineni uyakhishwa esikhumulweni.
Iyunithi lisebenza ekwelashweni kwegesi okukhipha uketshezi okungaxutshwe nalutho, okuxhunywe ngama-petrochemicals, izinto zokwenziwa, imikhiqizo yepulasitiki, ukumbozwa kwemishini, ukuphrinta kwephakeji, njll. Le yunithi ayikwazi ukuphatha kuphela igesi ephilayo ngokuphepha futhi ikhulise ukusebenza kahle kwemithombo ye-VOCs kakhulu kepha futhi iletha izinzuzo zezomnotho ezicabangelayo. Ihlanganisa izinzuzo zomphakathi eziphawulekayo nezinzuzo zemvelo, ezinikela ekuvikelweni kwemvelo.